Vagari Vopfuya Huku kuGokwe neNzira Dzisingatarisrwe
Chivabvu 08, 2021
Mrs Abi Nhongo of Gokwe South
Vagari vekuGokwe mudunhu reMidlands vanoti vari kubatsirwa kuvandudza hupenyu hwavo nchirongwa chinodzidzisa vagari vekumaruwa nzira dziri nani dzekurima, kusanganisira kuti vakwanise kuzvigadzirira chikafu chezvipfuyo zvavo pachavo.
Zvinhu zvinogona kumisa moyo yevakawanda uye zvisingatarisirwe kuitwa, kuchengeta kana kutaura nezvekuchengeta nhunzi nemazai emakonye adzinobereka.
Asi nguva zhinji izvi ndizvo zvinoitwa naMuzvare Miriam Sibanda nedzimwe nhengo dzechikwata chavo cheCombine Group, icho chiri kumaruwa eNyaje, kana kuti Ward 30 kuGokwe South.
Muzvare Sibanda nevamwe vavo vapfumamwe, ndevamwe vevagari vekumaruwa eGokwe South neGokwe North avo vakadzidziswa nzira dzakasiyana siyana dzekuvandudza marimiro avo, muchirongwa cheExtension and Trainng for Rural Agriculture kana kuti EXTRA, icho chiri pasi peLivelihoods and Food Security Programme, inoitwa munyika nemasangano anosanganisira Welthungerhilfe, neWorld Vision.
Pamusoro pezvimwe zvidzidzo, Muzvare Sibanda vanoti ivo nevamwe vavo vakadzidziswa kuchengeta makonye anozvarwa nenhunzi inonzi Black Soldier Fly ayo vanozoshandisa mukuvandudza chikafu chehuku.
Muzvare Sibanda vanoti pakutanga zvekuchengeta makonye izvi zvaive zvakaoma zvekuti vamwe vavo vakakurumidza kuwora moyo.
Amai Benhilda Nkomo vanoshanda semurimisi pasi pesangano reWelthungerhilfe muGokwe South.
Amai Nkomo vanoti pakutanga, kupfuya gonye reBlack Soldier Fly chinhu chaive chakaoma nekuda kwekusemesa kwaiita basa iri.
Asi vanoti nekuda kwechido chavaiona muvarimi, vakaramba vachishanda navo vachibatsirana kuita tsvakurudzo yekuwana nzira dzekupfuya makonye aya zvisinganhuwe kana kusemesa.
Imwe nhengo yeCombine Group, Amai Senzeni Govere, avo vane makore makumi matatu nemashanu, vanoti vaiwanzopfuya huku dzema broiler asi izvi zvakange zvave kuvadhurira nekuda kwekudhura kwechikafu chinodiwa pakuchengeta huku idzi.
Amai Govere vanoti vakaona zviine njere kuti vapinde muchirongwa chekupfuya makonye ichi.
Amai Govere, avo vane vana vashanu, vanoti dzidziso yavakawana yekugadzira chikafu chehuku pachavo vega uye kudzidza dzimwe nzira dzinovandudza kuchengeta kwezvipfuyo pamwe nekurima, zvabatsira zvikuru kusimudzira hupenyu hwavo.
Vanotungamira chirongwa chezvekudzidzisa varimi musangano reWelthungerhilfe kumaruwa eGokwe, VaRonald Tirivavi, vanoti sangano ravo rinoshanda navanachipangamazano vepaChinhoyi University of Technology vane hunyanzvi munyaya dzezvekupfuya uye kugadzirwa kwechikafu chezvipfuyo zvakasiyana-siyana.
VaTirivavi vanoti chirongwa chekuti varimi vakwanise kugadzira chikafu chezvipfuyo zvavo pachavo vega chakakosha zvikuru kunyanya munzvimbo dzisinganyanyonaya mvura yakawanda seGokwe.
Kunze kwekudzidziswa nezvekurima, vagari vanodzidziswawo nezvekuchengeta mari vari mumapoka emibatanidzwa yakasiyana-siyana ayo anozumba mibatanidzwa mikuru yeSavings and Credit Cooperatives, uyewo vanodzidziswa nezvekukosha kwakaita kuenzaniswa kwemikana mumhuri pakati pevanhurume nevanhukadzi.
VaTirivavi vanoti chirongwa ichi chabatsira zvikuru mukuvandudza hupenyu hweveruzhinji vari machiri.
Chirongwa cheExtended Training for Rural Agriculture mudunhu reMidlands chiri kushanda nemhuri dzinosvika zviuru makumi masere kuGokwe North neGokwe South uye kuKwekwe nekuShurugwi.
Chirongwa ichi chiri kuitwa pasi pesangano reFood and Agriculture Organisation nerubatsiro runobva kuhurumende yeBritain.